आईजिपी नियुक्ति प्रकरणः यसकारण कार्यपालिकाको निर्णय न्यायपालिकाले उल्ट्याउन सक्दैन - Gokarna News
आईजिपी नियुक्ति प्रकरणः यसकारण कार्यपालिकाको निर्णय न्यायपालिकाले उल्ट्याउन सक्दैन
शुक्रबार, फागुन ०६, २०७३ by Gokarna News
पछिल्लो दुई साता नेपालको राजनीतिमा निरन्तरताको क्रमभंगता जस्तै फरक बिषयले तताएको मात्रै छैन सरकारको कार्यकारी अधिकार माथि नै प्रश्न उठाएको छ । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको नियुक्तीको निर्णय गरेसंगै विवाद सतहमा देखिएको छ । मूलुकका अगाडी देखिएका महत्वपूर्ण मुद्धालाई समेत ओझेलमा पारेर नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक (आईजिपी) नियुक्तिमा सरकार, प्रतिपक्षीले ध्यान केन्द्रित गरेका छन । यसले सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर योग्यता पुगेका प्रहरी अधिकारीलाई नियुक्त गर्दा अनावश्यक विवादमा ल्याउनु त्यसमाथी सरकारसंग असम्बन्धित व्यक्तिलाई विवादमा मुछ्नु कति शोभनिय छ, विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबैभन्दा पहिले नेपालको न्यायपालिकाले नै सुरुवात गरेको हो । गत पुष २८ गते संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नासाथ सबैभन्दा ठूलो विवाद भयो । उच्च अदालतमा ३४ जना न्यायाधीशले बढुवाको अवसर पाए । जसमा जिल्ला अदालतमा कार्यरत बरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई पन्छाएर न्यायपरिषद्ले १ नम्बर देखि १५ हुंदै ५७ नम्बर सम्मका न्यायाधीशले नियुक्ति पाए । त्यसबाहेक सरकारी वकिलबाट योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नबनाएको भन्दै ४ दिन सरकारी वकिलले बेञ्च नै बहिष्कार गरे । पछि नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै गलत भन्दै आन्दोलन गर्नुप¥यो । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उत्कृष्ठ न्यायाधीश आउदा पनि विरोधको सामना गर्नुप¥यो न्यायपरिषद्ले । यसको एउटा कारणको बिषय पनि वरिष्ठता थियो ।
केहि दिन अगाडी मात्रै भूकम्पपछिको पूनर्निमार्णका लागि बनेको पूनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले हटाएर गोबिन्द पोखरेललाई नियुक्त ग¥यो । एमाले नेतृत्वको सरकारले ५ बर्षका लागि नियुक्त गरेका सिईओ ज्ञवाली अदालतमा पुग्नुभयो । आफुलाई वर्तमान सरकारले विना कारण हटाएकाले पूर्नबहाली पाउ भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति विवाद र आवश्यकता ः
सरकारले गत आईतबार नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकमा हाल कायम रहेका डिआईजी मध्येबाट जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको छ । चन्दको नियुक्ति लगत्तै एक जना अधिवक्ताले अदालतमा सार्वजनिक महत्वको बिषय अन्तर्गत रिट दायर गरे । सरकारले नियुक्त गर्नु दुई दिन अगावै परेको रिटमा फेरी परेको पुरक निवेदनमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिनुभएको छ । आदेशमा यस्ता बिषयमा दुबै पक्षको छलफल बिना आदेश दिनु उचित नभएको भन्दै आगामी आईतबार छलफलका लागि बोलाईएको छ । छलफलको बिषय नै सरकारले एकजना डिआईजीबाट बढुवा गरेर आईजीपी बनाउने निर्णय ठिक कि बेठिक भन्नेमा छ ।
अहिले रहेका ४ जना डिआईजी आईजीपीमा बढुवा हुन नपाएका नवराज सिलवालले उठाएको जेष्ठताको बिषय बढि महत्व पाएको छ । सिलवाल सहित ४ जना एसएसपीलाई बढुवा गर्ने बेला एक बर्ष जेठा व्याजीलाई उछिनेर सरकारले डिआईजी बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा तत्कालिन एसएसपी रविन्द्रप्रताप राणाले रिट दायर गुर्नभएको थियो । त्यहि रिटमा लिखित जवाफ र सिलवाल पक्षका अधिवक्ताहरुले डिआईजी पदमा ‘’बढुवाको लागि जेष्ठतालाई मात्र आधार नबनाईने हुँदा त्यसमा नेतृत्वदायी कार्यक्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ’ उल्लेख गरेका छन । २०७० साल अंक ७ मा तत्कालिन न्यायाधीश, पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले व्याख्या गर्दै भनेको छ ‘बढुवामा जेष्ठतालाई मात्रै आधार बनाएर बढुवा हुन सक्दैन’ । यो फैसलाको नजिर र त्यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ८ औं नम्बरका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेललाई नियुक्त गर्दा पौडेल भन्दा सिनियर सचिवहरु अदालत गएका थिए । त्यतिबेला समेत अदालतले मुख्यसचिव नियुक्त गर्नु सरकारको कार्याकारी अधिकार भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । यि नजिरलाई मात्रै हेर्ने हो भने अहिले सरकारले आईजीपी बढुवा गर्दा नपरेको डिआईजी नवराज सिलवाल अदालत जानुपर्ने आवश्यकता नै देखिंदैन ।
बिचौलीयाको चलखेल ः
यतिबेला जयबहादुर चन्दलाई सरकारले प्रहरी महानिरिक्षकमा बढुवा गरेपछि त्यसलाई रोक्न अदालत देखि नेताको घरमा चहार्ने बिचौलीया समुह सक्रिय छ । आईजीपी बढुवा प्रकरणपछि विचौलीयाहरुको दशैं आईराखेको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक जना डिआईजीले खिस्सी गरे । सरकारी संयन्त्रकै गाडी प्रयोग गरेर रातदिन घुम्ने थालेको एक हप्ता हुन थालिसकेको छ । अहिले चन्दका बिरुद्धमा केहि प्रहरी अधिकारीहरु नाङ्गो नाच देखाईरहेका छन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च प्रहरी अधिकारीहरु आईजी हुन नपाएको झोंकमा प्रहरी संगठनलाई नै बद्नाम गराउने गरी दलाली भईरहेको बताउछन । केहि वकिल, पत्रकारहरु र केहि राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेको तेस्रो÷चौंथो तहका नेताहरु लागि परेका छन । जसको काम नै विभिन्न तहबाट कांग्रेस, एमाले र माओवादीका उच्च तहका नेताको घरमा पुग्ने र सिलवाललाई प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन लबिङ गर्ने गरेका छन । उच्च स्रोतका अनुसार अहिले सरकारको निर्णय रोक्न करोडौं खर्च भईरहेको छ । सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका चन्दलाई गलत र हुन नपाएको सिलवाललाई दुधले नुहाएको चोखो देखाउने बिचौलीयाको पहिलो अस्त्र हो । तर तिनीहरु एक नम्बर मात्रै हेरेका छन । कसै न कसैको नाम एक नम्बरमा पर्नु स्वाभाविक हो । तर एसएसपीबाट बढुवा भएका चन्द कसरी अयोग्य हुन्छन ? विचौलीयाहरु यति पनि विश्लेष्ण नगरी भौंतारिरहेका छन ।
१ नम्बर हुने काईदा ः
सरकार गठन गर्ने बिषयमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेससँग केहि सहमति गरेको थियो । हालसम्म कुनै कागजातले पुष्टि हुन नसकेको बिषय शेरबहादुरले प्रहरी महानिरिक्षक कांग्रेसलाई राखेको हल्ला फैलाईएको छ । सरकारमा हुँदा आफुलाई सर्पोट गर्ने व्यक्तिलाई माथि ल्याउन खोज्नु दलीय राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ । राजनीतिक पावर हुंदैन्थ्यो भने स्वयम सिलवाल इन्सपेक्टरमा ५० नम्बर पछि रहेका व्यक्ति डिआईजीमा १ नम्बरमा कसरी आए ? मूलुकमा राजतन्त्र हुँदा राजपरिवारको शरणमा बढुवा र लोकतन्त्र आएपछि खाटी लोकतन्त्रबादीबाट राजनीतिक पहुँचले बढुवा पाएका हुन सबै जना । अहिले सिलवालको एक्लो खुबीले डिआईजी बनाएको र चन्दलाई शेरबहादुर देउवाले बोकेर डिआईजी भएको सम्मका कुरा भन्न भ्याएका छन, पेड प्रचारकहरुले । तर चन्द सिलवाल भन्दा कत्ति पनि कम्जोर होईन । हुंदै नभएको काँंग्रेस सभापतिलाई आरोप लगाएर आफुहरु उम्कने रणनीति मात्रै हो ।
यसकारण चन्द नै हुन्छन आईजीपी ः–
मन्त्री महासेठले भने– “सुरुङमार्ग निर्माण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको छ”